မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့....မော....ဒယ်....
စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့....မော....ဒယ်....
စိတ်ကူးစီစဉ်ထားတာက ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တင်မလို့။ဒါမဲ့မေ့တတ်တဲ့ဒီအကျင့်က ခြစ်ထားတဲ့စာရွက်လေးကိုမှမေ့ဖြစ်အောင် မေ့ရသေးတယ်။
ဒီတော့ အတင်းဆိုလဲဟုတ်၊အဖျင်းဆိုလဲဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုပဲပြောခဲ့တော့မယ် စိတ်ကူးတယ်.။။(ကြားဖြတ်ပေါ့..ညနေမှတခါအားရင် ရင်ဖျက်ပြီး ရေးထားတဲ့ကဗျာတင်တော့မယ်..ကိုင်း)
ဒီလိုပါ..။မြန်မာပြည်က လူငယ်အမျိုးသား(တချို့)တွေက (တချို့ ဆိုပေမယ့် တော်တော်များသောအရေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။)
အမျိုးသမီးထုတစ်ခုလုံးကို ကလော်ဆဲချင်စိတ်ပေါက်နေတာ ကြာကြာခဲ့ပြီထင်ပါ့။
ဘာကြောင့်ဆို ဟိုတစ်လောက ကလေးကစားစရာအရုပ်နာမည်နဲ့ HiP H0P သမားတစ်ယောက်ရဲ့ Black ခေါ်မလား သီချင်း ၃၊၄ ပုဒ်ထွက်လာပါတယ်။အားပေးလိုက်ကြတာ...သောက်သောက်ကိုလဲပဲ..။အားရစရာကြီးပေါ့။ဒါမဲ့ ကျမကြားရတဲ့ တစ်တွန်းတစ်စကတင်ကိုပဲ နားတွေ၊ပါးတွေပူထူသွားအောင်ဖြစ်ရတဲ့အထိ ရှက်စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ စီထားတဲ့ Hip Hop သီချင်းပါ။(ဟစ်ဟော့ပ်တဲ့၊သူတို့က အဲ့လိုပြောတော့လဲ ကိုယ်လဲအဲ့လိုပဲ ပြောရတာပေါ့ :P )
သူက ကိုယ်ပိုင် Single ခွေတစ်ခွေမှ မထွက်ရသေးဘူးလို့လဲ သတင်းကြားပါတယ်။ဒါမဲ့ သူငယ်က တော်တော်လေးကို (ပေါက်)နှင့်နေပါပြီ။
ထွက်လာတဲ့သီချင်းတွေက အမေနဲ့သား၊မောင်နဲ့ နှမ၊အဖေနဲ့ သမီး တူတူနားထောင်ဖို့အသာထား၊ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကြားလို့မှ မသင့်တော်တဲ့၊ချက်ချင်းထွက်ဝေးရာကို ထွက်ပြေးရလောက်တဲ့ထိ ညစ်ညမ်းသော၊သေးသိမ်သော စကားလုံးများ၊အသုံးအနှုန်းများနဲ့ သီချင်းတွေ ထွက်လာတာပါ။ညစ်ပတ်တဲ့ သူ့စကားလုံးတွေကိုပေါ်လွင်အောင် ဖော်ညွှန်းဖို့ ကျမမှာစကားလုံးမရှိပါ။
သို့သော် သေချာတာကတော့ မိန်းကလေးထုကို ဆဲထားတာနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူး။သူတို့အရပ်နဲ့ သူတို့ဇတ်နဲ့ဆိုပေမင့် နားထောင်သူတွေသည် ပြည်သူလုထုပါ။လူ့အလွှာပေါင်းစုံကပါ။သို့ကလို လူအလွှာပေါင်းစုံက လူတွေလိုက်ဆိုတော့ ဘာဖြစ်လာသလဲ။လူ့အလွှာပေါင်းစုံရဲ့ပါးစပ်ထဲ အဲ့သီချင်းတွေ၊အဲ့ဒိစကားလုံးတွေရောက်လာပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ အမှား၊အမှန် သေချာမဆန်းစစ်နိုင်သေးတဲ့ အသက်4နှစ်၊5 နှစ်အရွယ် စကားပြောတတ်စကလေးအရွယ်ထိ အဲ့စကားလုံးတွေရောက်ကုန်ပါတယ်။ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ပါ။ကြားရတဲ့ သူက ဟဲ့နင့်ပါးစပ်ခုပိတ်လိုက်စမ်း၊နောက်တစ်ခါနင်အဲ့ဒါမျိုး ဆိုရဲဆိုကြည့် ငါနဲ့တွေ့မယ် လို့အထိ တားဆီးပိတ်ပင်မိတယ်၊(တားမြစ်ပိတ်ပင်ဆိုတာကို လေသံလေးတောင် ကျမမကြားချင်ပေမယ့်)
ဒါပေမယ့် ကျမအိမ်ကောင်လေးက နောက်ထပ်ထပ်ဆိုပါတယ်။သူလဲ ရွတ်စရှိတော့ ချက်ချင်းရပ်မရဘူးထင်ရဲ့။ဒီတစ်ခါတော့ မနာနာအောင် အရင့်သီးဆုံးစကားလုံးရွေးပြီး ပြောပစ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ နင့်မလဲ အစ်မတွေ၊နှမတွေရှိတယ်မလား၊ဘာလို့ အဲ့ဒါကြီးကိုနင်ရွတ်နေတာလဲ။နင်မရှက်တတ်ဘူးလား...ဟင်..ဆိုတော့၊အာာာာာာာာ..မကြီးဖိုးဒီကလဲ မရွတ်တော့ဘူးဆိုပြီး အောင့်သက်သက်မျက်နှာနဲ့...။
တကယ်ကိုပဲ စကားပြောတတ်စအရွယ်၊သီချင်းတွေကိုလိုက်ရွတ်တတ်တဲ့အရွယ်ကလေးတွေကစပြီး အသက် 15 နှစ်လောက်၊သို့မဟုတ် အချို့သောအသက် ၁၈နှစ်အောက်လူငယ်တွေကသူတို့တွေရဲ့ပရိတ်သတ်တွေပါ။ရေရေလည်လည်အားပေးတာပါ။
ကျမတို့ သီချင်းကိုရူးသွပ်ခုံမင်တာထက် အများကြီးရင့်တဲ့ ရူးသွပ်မှုမျိုးနဲ့ သူတို့က Hip Hop ကိုရင်ခုန်ကြတဲ့လူငယ်တွေပါ။
အဲ့ဒိ ပရိတ်သတ်ထုရှေ့မှာ Represent လုပ်ပြီးရပ်နေတဲ့ အနုပညာရှင်နာမည်ခံထားသူတစ်ယောက်ဟာ ဖရုဿဝါစာကို ပါးစပ်ကတရပ်စပ်ထွက်လာတာဟာ ကျမအတွက်မယုံကြည်နိုင်သော အမှန်တရားတွေပါပဲ။ဒိထက်ပိုမှန်ပြီး ပိုကြောက်စရာကောင်းတာက လူငယ်ထုတစ်ရပ်လုံးက သူ့သီချင်းတွေကိုအားရပါးရ လိုက်ဆို၊လိုက်ရွတ်နေကြတာပါပဲ။ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ပြီး ဆဲမယ့်သူ၊မရှိသေးတော့ ဆဲမယ့်သူလဲ ထွက်လာရော အားကိုးတကြီးနဲ့ ဦးညွှတ်ပြီး လိုက်ဆဲကြတော့ပါပဲ။
သူကတော့ သီချင်းလုပ်ဆိုတာပါ။လူထုကြားထဲရောက်လာတော့ ဒါဟာ ဆဲဆိုနေတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
ဆရာသုမောင်ရေးတဲ့စာတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ဆရာ့အမေ အမေညိုက သူ့သားကိုေ_ာက်ပြောလို့ ဟဲ့ သားရယ်နင့်မလဲ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုများ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲထည့်ပြောရတယ်လို့ဟယ်....တဲ့။အဲ့ဒိကထဲက ကျနော်လဲပြောခါနီးတိုင်းတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲတဲ့...။(ဖတ်ဖူးတာပါ။စာလုံးကျ မှားကောင်းမှားနိုင်ပေမယ့် သဘောတရားကတော့ မလွဲလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။)
ဆိုတော့ ဒီသီချင်းသာအမေညိုရှိသေးလို့ ကြားခဲ့ရင် ဘာလောက်တောင် စိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မလဲမသိပါ။အမေညိုမှ မဟုတ်ပါ။အမေတိုင်း ကြားလိုက်ရရင် ကြက်သီးတဖြန်ဖြန်းထလောက်တဲ့အထိ စကားလုံးတွေပါ။
ကိုယ့်ဖန်တီးမှုသည် အဆိပ်ဖြစ်နေတာလား၊အားဖြစ်စေတာလား ဆိုတာလောက်တော့ သတိချပ်သင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်၊ဝေဖန်ရေးသည် ကိုယ်ကြိုက်တာ၊မကြိုက်တာကိုပြောခြင်းမဟုတ်လို့ ကြားဖူးနားဝရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ဒီစာသည် ကျမကြိုက်ခြင်း၊မကြိုက်ခြင်းများနှင့် မပတ်သက်၊မနှီးနွှယ်ပါ။ရင်မော၊ရင်နာလွန်းသဖြင့် ရင်ဖွင့်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။နောက်ပြီးသည်းခံဖတ်ပေးကြတဲ့ ဘလောဂ့်ရပ်မှ အစ်ကို၊အစ်မမောင်နှမများကို ကျေးဇူးလဲတင်တောင်းလဲပန်ပါသည်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကျောင်းပြေးတဲ့သူတွေကိုဆူနေတဲ့ ဆရာရဲ့စကားသံကို ကျောင်းလဲတက်ရဲ့နဲ့ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီးနားထောင်နေရသလို ဖြစ်နေပြီလို့ ရေးပြီးမှတွေးမိလို့ပါ)
posted by mirror time 2:07 PM
16 Responses to “စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့....မော....ဒယ်....”
အဲ သီချင်းထဲက တပုဒ် ထင်တယ် (သီချင်းလို့တော့ မပြောချင်ပါ) တယောက်က အကို့ကို မေးလ်ထဲမှာ ပို့လာလို့ နားထောင်ကြည့်တယ်... အင်း... အစပိုင်းမှာတင်... ရပ်လိုက်ရတယ်... သီချင်းတပုဒ်လုံးဆုံးအောင် နားမထောင် မိခဲ့ဘူး... သီချင်းနံမည်ကိုကလည်း (----က်----န်း) ဆိုပဲ... (တချောင်းငင်ကို ဖြုတ်ထားပါတယ်)
အဲ အဆိုတော်ဆိုတဲ့ ကောင်ဟာ သူ့ အမေအကြောင်းများ ပြောနေလေသလားတောင် အမြင် ကပ်ကပ်နဲ့ တွေးလိုက်မိသေးတယ်...
အသေးစိပ်နဲ့ သေသေချာချာ ပြောရရင်တော့ HipHop ရဲ့ သမိုင်းကို မြေလှန်သင့်တယ်လေ... ဒါမဲ့ ခု ဒီမှာတော့ မပြောတော့ပါဘူး... ပြောလည်း မပြောချင်ဘူး...
အားလုံးကို လိုက် အတုယူနေတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ...
ဒီက HipHop ဆရာကြီးတွေအားလုံးလိုလိုက မူးယစ်ဆေးဝါး(drugs)၊ လူဆိုးဂိုဏ်း(gangs)၊ မိန်းမ (women)၊ သေနတ် (guns)၊ ပက်ပက်စက်စက် ဆဲရေးတိုင်းထွာမှု (cursing, dirty words) - အဲဒါတွေနဲ့ မကင်းကြဘူးလေ... သီချင်းထဲမှာကို အဲဒါတွေနဲ့ ကင်းရင်လည်း ဘယ်သူကမှ ဆရာကြီးစာရင်းထဲ မထည့်ဘူး... (အ၀တ်အစားတွေ အကြောင်းကို မပြောလိုပါ)
HipHop ကို music လို့ လက်ခံရင်လည်း musical style ကိုပဲ ယူသင့်ပါတယ်... ခုတော့ အားလုံး ဒီ ဆရာကြီးတွေ လုပ်သလို လိုက်လုပ်နေကြရင်တော့ ...
ငရဲပန်းတွေ ပွင့်နေပြီလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့... ညီမရေ့...
ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ထောက်ခံပြီး ဖတ်သွားပါတယ်....
အားလုံးကို မဆိုလိုချင်သော်လည်း Hip Hop သီချင်း
အတော်များများရဲ့ စာသားတွေကို စိတ်ပျက်နေခဲ့ရတာကြာပါပြီ...
**ဆရာသုမောင်ရဲ့စာကို ကျွန်မလည်း ဖတ်ဖူးတယ်..
မေရာ ရေ့ ငါလည်း အဲ့သီချင်း ညီလေးတစ်ယောက်ပို့ပေးလို့နားထောင်လိုက်ရတယ်
ထင်တာက အင်တာနက်မှာပဲ ပျံ့နေပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့မရဘူးလားလို့ ဆိုထားတာကတော့ တော်၂ရိုင်းမှန်းသိတယ် ။ သီချင်းနာမည်ကိုက ဆဲထားသလိုကြီး ပထမနားထောင်နေတာဟုတ်သလိုလိုနဲ့နောက်ကျမှ ဒါကြီးကဆဲနေပ်ါလားလို့ အံ့သြသွားတယ်။ HipHop ဆိုတာ အလကားပါ ငါကတော့ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်ရရင် ဒါ ဂီတကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့သတ္တ၀ါတွေလို့ပဲပြောချင်တယ် ။ အားလုံးကိုခံစားတက်ပေမယ့် ဒီလို အရေးသားတွေနဲ့ သီချင်းမျိုးကိုတော့ စိတ်ကုန်မိတာ အမှန်ပဲ သူတို့အပြင်မှာ ပေါက်ကွဲနေတာတွေကို ပရိသတ်ဆီမှာ လာဖွင့်ချနေတာ လာဆဲတာလို့ပဲ ခံယူတယ် ။ သီချင်းရေတဲ့သူကလည်းပေါက်ရ “တောင်ကြီး ချယ်ရီမြေ” က “ဘာဘူ”ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဆိုကွာ “အက်စ်အမ် မှာဆုရတုန်းက ငါ့ကိုမေ့တာ ဒီ ၃ ယောက်ပဲ” ဆိုတာလည်း စဉ်းစားကြည့်ရင် သူတို့ ပြဿနာကို အရှက်မရှိပဲ ချပြနေတာပဲ ။ စိုင်းစိုင်း သီချင်းတွေလည်း အစပိုင်းက ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ အလကားပါ အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ ဆိုတာလည်း မြန်မာ အယူဆနဲ့ဆို ရိုင်းတာပဲ ။ ငါတော့ Hip Hop ဆိုတာ ကိုယ့်ကို ရန်လာဖြစ်ပြ လာဆဲပြနေတယ်ထင်လို့ နားကိုမထောင်ဘူးး ။ ဒါမျိုးကျတော့ ဂီတ အစည်းရူံးက မပယ်ဘူးတဲ့လားး သေနေလားမသိ စိတ်ကုန်တယ် ဘာမှကိုစိတ်တ်ိုင်းမကျ ။
(ဟဲဟဲ ရောယောင်ပြီးတော့ လာပေါက်ကွဲတာ အဲ့တာ နင် အစဖော်လို့ ငါနဲ့ဆိုင်ဘူးး :P )
သိရ ကြားရတာ စိတ်ညစ်စရာပါလား ညီမရေ။ အဲဒါပေါ့
နေရာလိုက်ရှာတာ မရလို့ လူအဖြစ်ကနေ တိရိစ္ဆာန်
ဘ၀ကို ရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးလေ၊ အဲဒီသီချင်းဆိုတဲ့
လူငယ်တွေလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်နေလို့လည်း
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ညီမရေ။ စိတ်လျှော့။
Hip Hop ကိုMusic လို့လည်းတခါမှမသတ်မှတ်ခဲ့မိဘူး
ဂီတကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လာကြတာပါပဲ။ ကိုယ်လည်းလူငယ်ဆိုတော့ HipHopကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အချင်းချင်းမကျေနပ်ကြတာတွေကို သီချင်းထဲထည့်ဆိုတာကတော့ ပိုက်ဆံပေးအားပေးရတဲ့ ပရိသတ်ကိုစော်ကားတာပဲလို့မြင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ သီချင်းကဆိုလို့ကောင်းရင်လိုက် ဆိုမှာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါအနုပညာမှမဟုတ်တာ။
လာလည်ပြီး ကွန်မန့်လေးတွေပေးထားတာမြင်တော့ အားရှိလိုက်တာဗျာ။
ပလုံးပထွေးနဲ့ ညစ်ပြီးဆိုတဲ့ အတင်းအဖျင်း သီချင်းကို မနှစ်သက်တာ အမှန်ပါ။ သံစဉ်မရှိ၊ စာသားခပ်ကြမ်းကြမ်းမို့ အိမ်မှာ မဖွင့်ဖို့ လူကြီးတွေက တစ်ချက်လွှတ် အမိန့် ချထားတာမို့ နားမထောင် ဖြစ်တာပါ။
ူဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ကြားရတာ တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဘယ်သူတွေ ကြိုက်ပြီးနားထောင်နေလဲ မသိပေမဲ့ ဆိုသူနဲ့ သူ့ရဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တကယ်ကို အံ့အောမိပါတယ်။ ဆိုရဲတဲ့သူကိုရောပေါ့။ မြန်မာ့ဂီတဟာ ဒီလိုတွေပါလားလို့ ကမ္ဘာက ထင်မြင်သွားမှာများ ကြောက်မိပါတယ်.. တကယ်ပါ။ ဂီတနဲ့ သိမ်ငယ်နိမ့်ဆင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လွဲမှားစွာ အသုံးချနေတဲ့ သူတွေကို အမြန်ဆုံး အမြင်မှန် ရပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်.. ရေးသူကိုလဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒါတွေ ခုခောတ်လူငယ်တွေ ကောင်းကောင်း နားလည်သင့်ပါတယ်။
ဒီ comment ကိုချရေးရတာ အားလုံးကိုချဲချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သိသင့်တဲ့အရာကိုပြောတာပါ။
Hip Hop ဆိုတဲ့ဂီတက လမ်းဘေး ကပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ပြီးရင် Hip Hop ဆိုတဲ့သူအများစုကလဲ Boy တွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Hip Hop ဂီတအစစ်မှာလမ်းဘေးအသုံးအနှုံးတွေပါလာမှာပါပဲ။ ပြီ:တော့ လူငယ်တွေ boy တွေပါဆိုနေမှ ဒီနှမတွေ ၊ အစ်မကိုင်တုပ်တယ်ဆိုတာမပါပဲနေတော့မလားဗျာ။ ကျွန်တော် ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်။ Hip Hop ကြိုက်တဲ့သူတွေ Eminem ဆိုတာကြားဖူးမှာပါ။ ကဲ Eminem ကသူ့ Show ပွဲမှာပရိသတ်ကို လက်ခလယ်တစ်ချောင်းထောင်ပြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအတွက် သူ့ကိုဘာများဝိုင်းလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ။ ဟ သူ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်ကတခဲနက် "ဟေး" ခနဲ တောင်အားပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ကဲ အဲဒီတော့အမေရိက ကလူတွေကဘာလို့အဲဒီလိုဖြစ်နေတာလဲတဲ့။ အဖြေက ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့က Real HipHop ပရိသတ်တွေပါတဲ့။
ကဲ ကဲ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် တို့ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ပြန်မေးလိုက်ကြရအောင်။
ငါတို့က Hip Hop ပရိသတ်အစစ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား?
မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား။
အဲဒီတော့ I တို့ကဘာတွေလဲ? I တို့က Hip Hop ဆိုပြီ:ဗန်းပြပြီး Pop Rap တွေ R & B တွေနဲ့နှိပ်စပ် တာကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါတဲ့။
အဲဒါဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Hip Hop ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့က Sai Sai လေး၊ ဒါမှမဟုတ် Examplez ကိုသွားသတိရ ကြတယ်။ တကယ်တော့ Sai Sai ဆိုတာတွေအများစုက Pop Rap ဒါမှမဟုတ် R&B တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။
အဲဒါကို ကျွန်တော် တို့က HipHop Hiphopလို့ တယုတယ ကြွေးကြော် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ Copy တွေနဲ့နှိပ်စက်လိုက်သေးတယ်။ Website တစ်ခုမှာရေးထားတာပါ Sai Sai က Hip Hop ဆိုရင် သူ့ရဲ့ "ပျော်တော်စက်" သီချင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲ တဲ့။ ဟာဗျာ တော်တော်ထိရောက်တဲ့ ဥပမာ ပါပဲ။
မင်းရောမကြွေးကြော်ခဲ့ဘူးလားဆိုရင် ကျွန်တော် ကတော့ခပ်တည်တည်ပဲ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဪ အဲဒီအချိန်တုံးက I က ကလေး ပဲရှိသေးတာကို ဘယ်သိမလဲ။
ပြီးတော့ Examplez အကြောင်း သူကတော့ ရှင်းပါတယ် ထွန်းထွန်း ကိုယ်တိုင်က သူတို့ဆိုတာ HipHop မဟုတ်ပါဘူးလို့ Media တွေကသာ Hip Hop လို့ သူတို့ကိုဝိုင်းရေးကြတာပါ တဲ့ အဲဒီလို မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါကို Website တစ်ခုမှာ နောင်တော်ကြီးတစ်ယောက် ရေးထားတာပါ။
ကဲ ကဲ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးစရာ နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်
(တစ်) R&B လိုင်းကိုပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်
(နှစ်) HipHop ကိုအားပေးချင်ရင်တော့ ဒီအကြောင်းကိုမပြောဖို့ပါပဲ။
ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကို မေးမယ် မင်းကဆရာကြီးလားပေါ့
ကျွန်တော်က ၁၇ နှနှစ် ပြည့်တာမှ ဘာမမကြာသေးဘူး။
ဒါ တွေကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုရင် Hip Hop ကိုလေ့လာပေါ့ဗျာ
Planet Myanmar Website ဗျ အဲမှာရှာ ကြည့်ပေါ့ HipHop အစစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ
ကဲ ကျွန်တော့ ကိုဆက်သွယ် ချင်ရင်တော့ yelfelcon@gmail.com ကို mail ပို့လိုက်ဗျာ
ဟဲဟဲ တစ်ခုပြောရဦးမယ် ဂျောက်ဂျက် ကဒီလိုတွေဆိုပေမဲ့ ph7နဲ့ ခဲ နဲ့ မပေါက်ခံရပါဘူးတဲ့ဗျ။ ဒါကိုကြားပြီးသွားပေါက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူး။
အမ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမ Blog ကို ကျွန်တော်ရောက်တာမနေ့ကမှပါ
ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တော့ အရေးအသားလဲ ကောင်:တယ် အတွေးအခေါ်လဲ ကောင်းတာကိုတွေ့တယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီ ခေါင်းစဉ်အောက်ရောက်တော့ ဒီအယူအဆကြီး ကလွဲနေတယ်လေ
ပထမ တော့ ငြိမ်ငြိမ်နေဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူကြီးကို အထွန့်တက်လို့ မှမကောင်းပဲ
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင် ကလဲလုပ်ပြီဆိုရင် သေသေချာချာလုပ် တတ်တဲ့ကောင်မျိုးဗျာ့
အမ ကျွန်တော်က Reply လုပ်ထားတဲ့စာကို နဲနဲလောက်ပြောကြည့်မယ်နော်
"လူသူလေးပါး သိပ်မသိလိုက်ပဲ ကျမဆီရောက်လာတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခု"
ကဲ ပြီးရင် ကျွန်တော့် အပေါ်က Comment နှစ်ခုကိုလည်းကြည့်ပါဦး
နောက်တစ်ခု ကျော်က ဟာက
January 8, 2009 4:52 PM
ကဲ အဲဒီတော့ အမမြင်မှာ ပေါ့အမရယ်
ခုနှစ်နာရီ မှာ Comment ရေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင် ကပဲ လူသူလေးပါး သိပ်မသိလိုက်ပဲ ရေးတာတဲ့လား အမ ရယ်
ပြီး ရင် "စကားမစပ်၊ခုမှ ထူးထူးခြားခြားရောက်လာပြီး မန့်သွားတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပါ"
အမ ကျေးဇူးအထူးတင်တော့ ကျွန်တော်လည်း အထူးဝမ်းသာတာ ပေါ့အမရယ်
အမလိုနံမည်ရ ပြီးသား Blogger တစ်ယောက်ကအဲဒီလို ပြောတော့ ကျွန်တော်က ဝမ်းသာရတာပေါ့
အရှေ့မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ "အမ Blog ကို ကျွန်တော်ရောက်တာမနေ့ကမှပါ" ဆိုမှ ခုမှ ထူးထူးခြားခြားရောက်လာပြီး မန့်သွားရတာပေါ့ အမရယ်
"အစ်ကို့စာမျက်နှာကိုမြင်ရုံနဲ့လဲ လန့်လဲ မလန့်ပါဘူး။အမြင်မတူလို့လဲ ရန်သူလို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေဖြစ်လို့လဲ ၇ပါတယ်"
ဟား...ဒီစာကို တော့ကြိုက်သွားပြီ အမ
အမလိုနံမည်ရ ပြီးသား Blogger တစ်ယောက် နဲ့မိတ်ဆွေ ဖြစ်ရမှာကိုကျွန်တော် ဂုဏ်ယူမိပါတယ် အမ
ကျွန်တော်က ၁၇ နှနှစ် ပြည့်တာမှ ဘာမမကြာသေးဘူး
ဒီလို ရေးထားတာပါ အမ
ကျွန်တော့ အထင်ပြောရရင် အမကအနည်းဆုံး 23 လောက်တော့ရှိမယ်
အဲဒီတော့ ကျွန်တော့ကို အစ်ကို အကို လို့ မခေါ်ပါနဲ့ အမရယ်
ကျွန်တော် ငရဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုလည်း ယုံလည်း ယုံတယ်
ကြောက်လည်းကြောက် တဲ့အတွက် မလုပ်ပါနဲ့ အမရယ်
နောက် ပြီးတော့ "စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့....မော....ဒယ်.... "
ဒီခေါင်းစဉ်အောက် မှာ အမနဲ့ အမြင်မတူတာဆို လို့
ကျွန်တော်တစ်ယောက် ထဲရှိတာကို အဲဒါကို ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့
ရှေ့ဆက်ရမယ့် Blogger တစ်ယောတ်ရဲ့ဘဝ ကိုကြည့်ပြီး
ကျွန်တော်လည်း "စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့....မော....ဒယ်....
ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုခုပြော ချင်ရင် ကျွန်တော့် Mail ကိုတိုက်ရိုက် ပို့လည်းရပါတယ် အမ
Mail ကဒီမှာပါ ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ကို Comment တက်ချင်တဲ့ အကို အမ များရှိရင် Welcome ပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်မှာအမ မရှိလို့ အမကိုပဲ တကယ့်အမရင်း သဖွယ်သတ်မှတ်ပြီး
အမ က တော့ဘယ်လို ထင်ထင် ကျွန်တော်အမကို ကိုယ့် အမတစ်ယောက်အနေ နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဗျာ
အမှားပါရင် အမှန်ပြင်ဖတ် ပေးပါ အမရယ်
ဒီစာကို အမတွေ့ ပြီးသွားပြီလားမသိဘူး
ဖတ်ကြည့်ပေါ့ အမ ရယ်
သူ့အယူအဆတွေ ကို ခံစားကြည့်ပေါ့
အင်္ဂါနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 20 2009 14:05 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အင်း... ခုမှ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဗျာ ဒါကဒီလိုရှိတယ် .... အဟီ သိပ်လဲ မပြောရဲ
ဒီလိုလေဗျာ ခုခေတ် ရွာ(မြန်မာပြည်)မှာက
အထူးသဖြ့်ပေါ့လေ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ တခြားမြို့
တွေမှာလဲ ရှိမှာပါ ကျနော်မသိလို့ပါ ထားတော့
ရန်ကုန်ပဲ ပြောကြစို့။ လက်ညိုးထိုးမလွဲ အရက်
ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ဘီယာစတေရှင်၊ အနှိပ်
ခန်း၊ အလှပြင်ခန်းနာမည်တပ်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့
အနှိပ်ခန်း၊ တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခို
ရိပ်သာ၊ ညကလပ်၊ ကေတီဗွီ၊ စသည်စသည်
တို့က နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေကြပြီဗျ ဒီတော့ဗျာ
စဉ်းစားတော့ ဆက်ပြောရင် မကောင်းတော့